Cabanga: I-Amazing Image Compressor ene-Interface Yesimanje | Kusuka kuLinux
Ezikhathini lapho ukufunda kungandile kakhulu futhi lapho i-multimedia iyonke ihlanganisa iningi lentshisekelo yethu, kubalulekile impela ukwazi ngamathuluzi asivumelayo nokwandisa izithombe zethu, njengoba kunjalo Imagine, a i-compressor enamandla yesithombe okulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi inikeza imiphumela esebenza kahle kakhulu.
1 Yini i-Imagine?
2 Ungayifaka kanjani i-Imagine
Ithuluzi lomthombo ovulekile, elenzelwe ukusetshenziswa UhloboScript con I-Electron nemitapo yolwazi yokuminyanisa i-pngquant ngokuhlangana ne i-pngquant y ummoj, esivumela ukuthi sicindezele futhi siguqule izithombe ngendlela elula, esheshayo nephumelelayo.
Lesi compressor sesithombe siyi- iyahambisana namafomethi we-JPEG, PNG neWebP, i-cross-platform (I-Linux, iWindows ne-MacOS), Izilimi eziningi, inomphathi wesithombe onamandla we-batch.
I-interface yethuluzi inembile kakhulu futhi incane, uma uyisebenzisa, mane nje uhudule noma ungeze izithombe esifuna ukuzilungiselela, ezizokhonjiswa njengezithonjana futhi ezizosinika ithuba lokuguqulela kufomethi oyifunayo kanye / noma ukukhetha ikhwalithi yokugcina yesithombe, ngaso sonke isikhathi singabona ukubuka kuqala kwesithombe esivelayo esingaqhathaniswa nesithombe sokuqala, ekugcineni sisilande enkombeni esiyithandayo.
Ungayifaka kanjani i-Imagine
Ukufakwa kwe-Imagine kulula kakhulu, kufanele nje silande i-AppImage yakamuva etholakala kufayela le- ukukhishwa kohlelo lokusebenza futhi ake senze imiyalo elandelayo ngokufakwa kwayo okulungile
chmod a + x Cabanga- [v] -x86_64.AppImage # Yenza i-AppImage isebenze
./ Cabanga- [víritu-x86_64.AppImage # Faka bese usebenzisa i-Imagine
Isifaki sizovula futhi kufanele sinikeze izimvume zokufakwa kokuncika, ngaphezu kokwakhiwa kwezinqamuleli. Ngemuva kwalokho singagijima futhi siqale ukujabulela lesi compressor sesithombe esinamandla, ngendlela efanayo, singathola ukuphumelela kwethuluzi kunketho yehluzo kusuka kumenyu yezinhlelo zokusebenza.
Leli ithuluzi elilula kepha linamandla amakhulukuyindlela elula ngokwedlulele yokwenza cindezela izithombe zethu futhi uziguqulele kwamanye amafomethi kusuka a I-GUI ene-interface enhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Cabanga: I-compressor yesithombe esimangalisayo enesixhumi esibonakalayo sanamuhla
crap ayisebenzi kumawindi 10
Yini iWindows 10?
deibis contreras kusho
Kuyindlela yokusebenza engenamsebenzi.
Phendula kuma-deibis contreras
I-Nonsense, i-W10 ikwazile ukwenza abantu abaningi abangajwayelene neLinux ukuthi bayibone, kuyinto efanele ukuthi ibongwe.